China Wj 200 1800 Mpanamboatra ny baoritra vita amin'ny baoritra vita pirinty sy mpamatsy | Xinguang
Wj 200 1800 Tsipika famokarana baoritra mitafo
1. rafitra fanamainana etona ： volavolan-dalàna miaraka amin'ny 4000Kg / Hr faneriterena etona: 1.25Mpa fantsona etona。
2. milina voafehy rivotra. fantson-drivotra. lakaoly mampita pipa。
3. famatsiana herinaratra. tariby mifandraika amin'ilay vilany fandidiana · Browse
Mitsangana vy tsy mihetsika shaftless
Spindle ¢ 240mm, rocker mavesatra hyperbolic, mihombo ny nify , frezy marobe, fanongotra fiara hidraulika, fanakanana havia sy havanana eo afovoany.
manara-maso halavan'ny6000mmTrolley lasitra lovia 10mm efa niasa。
Varingarin'i preheat ambony taratasy
-roller ￠900mm，ao anatin'izany ny taratasy fanamarinana fitoeran-tseranana. Zoro fonosana fanitsiana herinaratra。Fonosina afaka ampifanaraho amin'ny faritra 360 ny faritra preheat taratasy°.
Varingarin'i preheat mialoha ny taratasy
Facer tokana karazana tsy misy rantsan-tànana
Ny savaivony fanodinam-boaloboka lehibe dia 360mm, fitaovana mihodina mitafo fanitso dia vy 48CrMo miaraka amin'ny fanodinana karbida tungsten, hamafin'ny haavo HV1200. Fifanakalozana vondrona misy tile sy maodely. Lakaoly fanaraha-maso mandeha ho azy PLC, efijery mikasika ny masinin-dehilahy, fanesorana taratasy fanamaivanana ny tsindry fiara mandeha ho azy.
Masinina lakaoly roa
Famolavolana lakaoly 269MG.Ny fiara mandeha maotera tsy miankina tsy miankina, elanelan'ny lakaoly fanitsiana.
tetezana mpampita entana mavesatra
Fantsona 200mm lehibe, fantsom-pamokarana motera tsy miankina manintona famahanana taratasy, fihenan'ny adsorption. Fanitsiana herinaratra。
Fanitsiana mandeha ho azy
Tsy misy maodely fanitsiana herinaratra afa-tsy angovo. Ny fanovana ny sakan'ny taratasy dia tsy mila fanitsiana
Ambainy feno infra red detarareda。Mampihena ny fako taratasy niteraka ranomaso。 mampihena ny fako amoron'ny taratasy tsy marim-pototra.
Rakitra 40Fantsona 0 mm GB，Takelaka mafana Chrome 600 mm * 1Sombiny 8, takelaka fanafanana arko fidirana no mahatonga ny taratasy ambony hanatsara haingana ny mari-pana.PLCtakelaka fanaraha-maso mandeha ho azy. Fanitsiana mandeha ho azy ambony sy ambany, Seho amin'ny mari-pana, motera matetika.
NCBD scorer slitter mahia
Tungsten firaka vy, antsy 5 andalana 8，karazana tsindry aotra-tsindry. Ssolosaina servisy chneider servo mandeha ho azy, sakan'ny outlet suction namboarina ho azy.
Antsy helika NC
Fanaraha-maso servo AC feno, frezy fitehirizana angovo, firafitry ny helika, fandefasana fitaovana helika,fitaovana vita anaty diloilo fiarovana tsindry, Fampisehoana efijery 10,4-inch.
Stacker maodely vavahady mandeha ho azy
Fananganana sehatra Servo drive, fizarana telo amin'ny famindrana matetika, teboka mandeha ho azy ao anaty batch, famoahana mandeha ho azy, famoahana fehin-kibo avo avy any ivelany avoaka, fiaramanidina fitaterana mahazatra.
Rafitra fametahana lakaoly
Fantsom-pitaterana an'ny mpanjifa。Glue configurement dia noforonin'ny tank tank, tanky lehibe tank tanky fitehirizana 、 ary mandefa paompy plastika, paompy plastika miverina。
Paompy rivotra、 Ny fantsom-pivarotana dia omanin'ny mpanjifa.
Ireo singa ao anaty rafitra etona ampiasaina amin'ny valves GB rehetra。Anisan'izany ny lozisialy rotaty, ambony sy ambany。fandrika，latabatra fanerena sns。Vovoka sy fantsom-panjakan'ny mpanjifa.
Rafitra kabinetra fanaraha-maso herinaratra
Rafitra fanaraha-maso elektronika： Ny mekanisma hafainganam-pandehan'ny tsipika manontolo dia mampiasa motera hafainganam-pandeha elektromagnetika。Ambonin'ny kabinetra hoso-doko tsifotra elektrostatika ，Azo akanjo sy tsara tarehy.Ny fifandraisana voalohany dia mivoaka mampiasa marika lehibe.
Splicer mandeha ho azy
Ny splicer mandeha ho azy dia mitazona ny tsipika fivorian'ny kaontenera tsy miatoRed Mampihena ny fanjifana taratasy, manatsara kokoa ny famokarana. Hafainganana farany ambany200m / min
Hatsarao ny mandeha ho azy ny tsipika famokaranaMora ny miasa. mampihena ny fanjifana, manatsara ny fampiasana ny taratasy ifotony, mitsitsy vola. Tsipika famokarana mandeha ho azy, kalitaon'ny baoritra miorina. Ampitomboy ny hafainganan'ny hafainganana, Ampitomboy ny famokarana。A statistikan'ny famokarana automatique ， Mora ny mitazona ny tsipika famokarana, manatsara ny fahombiazany.
Toeram-paty mandeha ho azy
Ny famokarana Chengdu, ny fitaovana rehetra nampiana tamin'ny alàlan'ny programa, ny fifehezana PLC tanteraka, ny fandrefesana ny refy, tsy misy ny fampiasana ny rafitra rehefa apetaka ny rafitra stabilizer, ny fidiran'ny tsiranoka ary ny fametahana, ny fametahana ary ny fitehirizana maharitra maharitra maharitra.
Parameters masontsivana sy fepetra takiana lehibe amin'ny tsipika famokarana
karazana ： WJ200-1800-Ⅱtype dimy sosona famokarana valin-drihana fanodinana ：
Ny famolavolana haingam-pandeha
Hafainganam-pandeha telo sosona
Hafainganam-pandeha dimy sosona
Hafainganam-pandeha fito sosona
Hafainganana tokana fanovana avo indrindra
Fahamarinana fisarahana maharitra
Hafainganana ireo tanjona kendrena etsy ambony takiana mba hahatratrarana： Mandaitra1818mmmm mahomby, Mankato ireto fenitra manaraka ireto ary miantoka ny toetran'ny fitaovana amin'ny taratasy 175 temperature mari-pana amin'ny hafanana.
Fanondroana taratasy ambony
100g /㎡ – 180g / index Fanondroana fanorotoroana peratra （Nm / g） ≥8 (Rano misy8-10%)
80g /㎡ – 160g / index Fanondroana fanorotoroana peratra （Nm / g） ≥5.5 (Rano misy8-10%)
Ao amin'ny fanondroana taratasy
90g /㎡ – 160g / index Fanondroana fanorotoroana peratra （Nm / g） ≥6 (Rano misy8-10%)
Ny tsindry ambony indrindra 16kg / cm2
Tsindry mahazatra10-12kg / cm2
mampiasa4000kg / Hr
Ny tsindry farany ambony 9kg / cm2
Fanerena mahazatra4-8kg / cm2
fampiasana1m3 / min
≈Lmin85.5m * Wmin12m * Hmin5m (Ny tena sary amin'ny mpamatsy mba hanomezana nohamarinina)
Fizarana an'ny mpanjifa
1System rafitra fanamainana etona ： volavolan-dalàna miaraka amin'ny 4000Kg / Hr faneriterena etona: 1.25Mpa fantsona etona steam
2Machine milina voafehy rivotra 、 fantson-drivotra 、 lakaoly mampita pipa。
3、 Famatsian-herinaratra connected tariby mifandray amin'ny tontonana fandidiana sy fantsom-pifandraisana line
4Sources loharano rano 、 fantson-drano 、 siny sy ny sisa。
5、 Rano, herinaratra, fantsom-pamokarana entona sivily。
6、 Andramo amin'ny taratasy ifotony archarcharch、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 use、 use use
7、 Fitaovana solika, menaka manosotra, menaka hydraulic, solika manosotra。
8、 Fametrahana 、 fanendrena ny sakafo, trano honenana。Ary omeo ny installer ny fametrahana。
Teo aloha: Mpihazona taratasy ZJ-V5B (V6B)
Manaraka: Syk1224 4 Fanontam-pirinty miloko fanoratana maty miaraka amin'ny milina miangona